Okufakiwe -Shenzhen HUANET Technology CO., Ltd.
Ukwandiswa kokunxibelelana kokukhanya kumakhaya onke, kuwo onke amashishini,
Ipaki nganye ivumela abantu ukuba banxibelelane ngokusondeleyo neentsapho zabo kunye namashishini ukuze basebenze ngokufanelekileyo
Yintoni enokuyenza kuwe iHUANET namhlanje?
Ubutyebi bemodeli yesiphelo
Zonke iintlobo ze-OLT / ONU / iTransceiver / Tshintshela / i-WDM inokubonelelwa, ngomgangatho ophezulu, ixabiso lokukhuphisana kunye nenkonzo ebalaseleyo.
FTTH Professional, FTTX isisombululo namava
I-HUANET ineminyaka engaphezulu kwama-20 yembali, ngaphezulu kweenkonzo ezili-10 kwipotfoliyo yayo kunye nabathengi abali-10 000 abakhonzelweyo.
OEM & ODM Elungiselelweyo Service
Inkonzo ye-OEM kunye ne-ODM inokubonelelwa yiHUANET, ngamava kunye namandla ayimfuneko ekuqinisekiseni iinkonzo ezisemgangathweni kunye nenkonzo yabathengi.
Eyona mveliso ifanelekileyo
I-MA5800, isixhobo sokufikelela kwiinkonzo ezininzi, yi-4K / 8K / VR ekulungele i-OLT yexesha leGigaband. Isebenzisa uyilo olusasaziweyo kwaye ixhasa iPON / 10G PON / GE / 10GE kwiqonga elinye. Iinkonzo ezihlanganisiweyo ze-MA5800 zidluliswa kwimithombo yeendaba eyahlukeneyo, zibonelela ngeyona vidiyo ilungileyo ye-4K / 8K / VR, isebenzise ubuchule obusekwe kwinkonzo, kwaye ixhasa ukuvela okugudileyo ukuya kwi-50G PON. Uluhlu lwe-MA5800 emile kwisakhelo luyafumaneka kwiimodeli ezintathu: MA5800-X17, MA5800-X7, kunye MA5800-X2. Zisebenza kwiinethiwekhi ze-FTTB, FTTC, FTTD, FTTH, kunye ne-D-CCAP. I-1 yebhokisi emile okwebhokisi ye-OLT MA5801 isebenza kuyo yonke into ebonakalayo yokufikelela kwindawo yokuxinana.
I-Stock Lot yoqobo i-huawei ma5680t gpon olt i-specs ze-huawei ma5680 olt
Uthotho lwe-SmartAX MA5680T luphuhliswa ngokusekwe kwiqonga elidityanisiweyo lesizukulwane sesithathu sikaHuawei kwaye zii-OLTs zokuqala zokudibanisa kwihlabathi. Uthotho lwe-MA5680T ludibanisa umsebenzi wokudibanisa kunye nokutshintsha, ukubonelela nge-high-densityxPON, i-Ethernet P2P, kunye namazibuko e-GE / 10GE, kunye nokubonelela ngeenkonzo zelayini zabucala ze-TDM kunye ne-Ethernet ngokuchaneka kwewotshi ephezulu ukuxhasa inkonzo yokufikelela kwi-Intanethi, inkonzo yevidiyo, inkonzo yelizwi , kunye nokufikelela okuphezulu kwinkonzo. Olu chungechunge luphucula ukuthembeka kwenethiwekhi, ukunciphisa utyalomali kulwakhiwo lwenethiwekhi, kunye nokunciphisa iindleko ze-O & M.
Uthotho lwe-MA5680T lubandakanya amandla amakhulu eSmartAX MA5680T kunye nomthamo ophakathi weSmartAX MA5683T. Ihardware kunye nesoftware yezi modeli zimbini ziyahambelana ngokupheleleyo ukunciphisa iindleko zokulungiselela iimpahla zenethiwekhi. Kwezi modeli zimbini, iSmartAX MA5680T ibonelela ngeendawo zokusebenzela eziyi-16 kwaye iSmartAX MA5683T ibonelela ngeendawo zokusebenzela ezi-6.
8 16 32 PON Izibuko OLT Mini Optical Line Izixhobo Terminal SmartAX MA5608T
I-MA5608T Mini OLT yenzelwe ukujongana ne-Fibre kwisiseko (i-FTTP) okanye imeko ezinzulu zokuhanjiswa kwefayibha apho i-OLT enkulu
I-chassis isenokungalingani ngokufanelekileyo ngezizathu ezahlukeneyo. IHuawei mini OLT MA5608T yenzelwe ukuba ibe ngumphelelisi ogqibeleleyo
Olunye u-MA5600 uthotho olukhulu lwe-OLT kwaye lubonelela ngeempawu ezifanayo zenqanaba lokuphatha kunye nokusebenza.
Uyilo lofikelelo oludibeneyo lwe-MA5608T luyenza isisombululo esifanelekileyo sokuhanjiswa kwiindawo ezinjengeendawo ezinesithuba esinyanzelekileyo,
iikhabhathi zangaphandle okanye amagumbi angaphantsi kwesakhiwo. Inokhetho lwamandla e-AC kunye neDC, uluhlu lobushushu olwandisiweyo, kwaye inikezela ngokufakwa ngokulula.
Yenzelwe ukuxhasa ukwanda kwebango le-bandwidth, i-MA5608T ine-200 Gbps yangemva. Ukudityaniswa komthamo ophezulu
Unxibelelwano lwendlela yokusebenza ekumgangatho ophezulu luvumela abaqhubi ukuba bahambise uluhlu lweenkonzo zengeniso ephezulu kakhulu
I-MA5608T yabelana ngolwakhiwo olufanayo lwemveliso kunye ne-MA5600 uthotho lwe-OLTs ukuvumela ukukhula komthungo okungafakwanga.
Abavelisi: HUNAET ONU HG911A
I-HZW-HG911A (HGU) sisixhobo esine-GPON ONT esinefomathi esisebenza ekufikeleleni kwe-broadband engaxutywanga. Ixhasa itekhnoloji yomaleko 2 Ethernet switch kwaye kulula ukuyigcina nokuyilawula.Ingasetyenziselwa ukufikelela kwi-FTTH / FTTP yesicelo sabemi kunye nabasebenzisi beshishini. kunye neemfuno zobugcisa GPON Izixhobo.
I-EchoLife EG8141A5 ibonelela ngezibuko elinye le-GE, izibuko elinye lePOTS, amazibuko amathathu e-FE kwaye ixhasa i-2.4G iWi-Fi. I-ONT inezinto eziphezulu zokuhambisa phambili ukuqinisekisa amava afanelekileyo ngeVoIP, i-Intanethi kunye neenkonzo zevidiyo ze-HD. Ezi zinto zenza ukuba i-EG8141A5 ibe lukhetho olufanelekileyo lofikelelo lwebhendi ebanzi.
I-HZW-HG623-TW (HGU) sisixhobo se-XPON ONT, esenzelwe ukuzalisekisa i-FTTx kunye nemfuno yenkonzo yokudlala kathathu yomsebenzisi womnatha osisigxina. Le bhokisi isekwe kubuchwephesha beGigabit obuzinzileyo nobukhulileyo, obunomlinganiso ophezulu wokusebenza kwixabiso, kunye netekhnoloji yeLayer 2/3, WDM kunye nomgangatho ophezulu weVoIP ngokunjalo. Inokuthenjwa kakhulu kwaye kulula ukuyigcina, kunye neQoS eqinisekisiweyo yenkonzo ezahlukeneyo. Iyahambelana ngokupheleleyo nemigaqo yobuchwephesha efana ne-ITU-T G.984.x kunye neemfuno zobuchwephesha zeXPON Equipment.
HG643-W (HGU) i XPON ONT isixhobo sokuphela , yeyiphi yenzelwe ukufezekisa i-FTTx kunye nemfuno yenkonzo yokudlala kathathu yomsebenzisi womnatha osisigxina. Le bhokisi isekwe kwi-Gigabit ezinzileyo kunye neqolileyo XItekhnoloji ye-PON, enomlinganiso ophezulu wokusebenza kwixabiso, kunye netekhnoloji yoLuhlu 2/3, Ithembeke kakhulu kwaye kulula ukuyigcina, kunye neQoS eqinisekisiweyo yenkonzo ezahlukeneyo. Iyahambelana ngokupheleleyo nemigaqo yezobugcisa efana ne-ITU-T G.984.x kunye neemfuno zobugcisa ze- XIzixhobo zePON.
Izibuko le-GPON WAN kunye ne-1.244Gbps uplink / 2.488Gbps isantya sekhonkco elisezantsi
I-Ethernet esebenzayo ye-WAN port ene-1.25Gbps ye-bi-direction link yejubane
I-1x GE + 3FE Ethernet RJ45 Izibuko
2 × 2 11n inkxaso ye-WIFI ye-300Mbps yesantya sokudibanisa
I-1x FXS RJ11 izibuko lenkonzo yelizwi
I-1x i-USB port kumamkeli okanye kwimowudi yesixhobo
Iadaptha ye-DC 12V, ubuninzi be-1A yangoku
-5 ukuya ku-50, ukusebenza ubushushu kokugquma
I-100G CFP2 ER4 i-transceiver ebonakalayo idibanisa ukuhambisa kunye nokufumana indlela kwimodyuli enye. Kwicala lokuhambisa, imizila emine yemifudlana yedatha egciniweyo ifunyenwe, ibuyiselwe, kwaye idluliselwe kubaqhubi abane be-laser, abalawula ii-lasers ezine-EMLs ezinokufakwa kombane nge-1296, 1300, 1305, kunye ne-1309 nm embindini wamaza. Iimpawu ezibonakalayo emva koko ziphindaphindwe zibe yimowudi yendlela enye ngesidibanisi esimiselweyo se-LC esecaleni kwicala lokufumana, imizila emine yemijelo yedatha ye-optical optic DE-multiplexed by a integrated optical demultiplexer. Idata nganye yedatha ifunyanwa kwakhona yi-PIN-detector yesixhobo kunye ne-trans-impedance amplifier, iphinde yenziwe ixesha, kwaye idluliselwe kumqhubi wemveliso. Le modyuli inonxibelelwano olushushu olusebenzayo lombane, ukusetyenziswa kwamandla okuphantsi, kunye nolawulo lwolawulo lwe-MDIO.
Imodyuli ye-40KM 40G QSFP ebonakalayo
Inkqubo ye- HUAQ40E Imodyuli ye-transceiver eyilelwe i-40Km izicelo zonxibelelwano ezibonakalayo. Uyilo luyahambelana ne-40GBASE-ER4 yomgangatho we-IEEE P802.3ba. Imodyuli iguqula amajelo ama-4 okufaka (ch) ye-10Gb / s yedatha yombane kwi-4 CWDM yeempawu zomqondiso, kunye nokuphindaphinda zibe kwisitishi esinye sokuhambisa i-40Gb / s. Kwelinye icala, kwicala lokufumana, imodyuli ngokokungafaniyo yenza i-40Gb / s kwigalelo le-4 CWDM yamajelo, kwaye iwaguqulele kwidatha yombane yokuvelisa umbane.
Amaza ombindi weendlela ze-4 CWDM ayi-1271, 1291, 1311 kunye ne-1331 nm njengamalungu egridi ye-CWDM yamaza echazwe kwi-ITU-T G694.2. Inesidibanisi esiphindiweyo se-LC sokunxibelelana okubonakalayo kunye nesinxibelelanisi esine-38-pin kwisinxibelelanisi sombane. Ukunciphisa ukusasazeka okubonakalayo kwinkqubo yokutsala ixesha elide, ifayibha yohlobo olunye (SMF) kufuneka isetyenziswe kule modyuli.
Imveliso iyilelwe kwifom factor, uqhagamshelo lwamehlo / umbane kunye nojongano lwedijithali lokuqonda isifo ngokwe-QSFP yeMulti-Agreement yeMithombo-luvo (MSA). Yenzelwe ukuba ihlangane nezona meko zinzima zokusebenza zangaphandle kubandakanya ubushushu, ukufuma kunye ne-EMIinterference.
Imodyuli isebenza kumbane omnye + 3.3V kunye ne-LVCMOS / LVTTL imiqondiso yolawulo lwehlabathi enjengeModyuli yangoku, ukuseta kwakhona, ukuphazamisa kunye neMowudi yaMandla ePhantsi ziyafumaneka ngeemodyuli. Unxibelelwano olunocingo lwe-2-yocingo luyafumaneka ukuthumela nokufumana imiqondiso yolawulo oluntsonkothileyo kunye nokufumana ulwazi lwedijithali lokuqonda isifo. Iitshaneli ezizodwa zinokuqwalaselwa kwaye amajelo angasetyenziswanga anokuvalwa kulungelelwaniso oluphezulu loyilo.
Le mveliso iguqula idatha ye-4-yejelo le-10Gb / s yombane kwiCWDM imiqondiso yokukhanya (ukukhanya), ngumtya ojikelezayo we-4-waveleng Distributed Feedback Laser (DFB). Ukukhanya kudityaniswe ngamalungu e-MUX njengedatha ye-40Gb / s, isasazeka kwimodyuli yokuhambisa evela kwi-SMF. Imodyuli eyamkelayo yamkela i-40Gb / s CWDM yokufakelwa kwemiqondiso, kwaye iyiphindaphinde ibeyimigangatho ye-4 ye-10Gb / s ngeendlela ezahlukeneyo zobude. Ukukhanya kwelanga ngalinye kuqokelelwa yi-discrete avalanche photodiode (APD), emva koko ikhutshwe njengedatha yombane emva kokukhuliswa okokuqala yi-TIA emva koko ngesikhulisi seposi.
Inkqubo ye- HUAQ40E Uyilelwe ngefom factor, uqhagamshelo lwamehlo / umbane kunye nojongano lwedijithali lokuqonda isifo ngokwe-QSFP iMulti-Source Agreement (MSA). Yenzelwe ukuba ihlangane nezona meko zinzima zokusebenza zangaphandle kubandakanya ubushushu, ukufuma kunye nokuphazamiseka kwe-EMI. Imodyuli inikezela ngokusebenza okuphezulu kakhulu kunye nokudityaniswa kwento, efikelelekayo ngocingo lwe-wire-serial interface.
HUANET HUAXDI-xx1XL-CD80 yi-DWDM XFP Transceiver ibonisa uzinzo olugqwesileyo lobungakanani bamaza, ukuxhasa ukusebenza kwijelo le-100GHz, ixabiso lemodyuli esebenzayo. Yenzelwe i-10G DWDM SDH, 10GBASE-ZR kunye ne-10G yeFiber- Channel application. I-transceiver inamacandelo amabini: Icandelo lokuhambisa libandakanya i-laser ye-EML ebandayo. Kwaye icandelo lokwamkela liqukethe i-APD photodiode edityaniswe ne-TIA. Zonke iimodyuli ziyanelisa iimfuno zokhuselo lweklasi I-laser I-DWDM XFP i-transceiver ibonelela ngesixhobo esongwayo sokujonga, esivumela ukufikelela kwexesha-lokwenyani kwiiparamitha zokusebenza ezinje ngobushushu be-transceiver, i-laser bias yangoku, amandla e-optical, amandla e-optical kunye namandla ombane we-transceiver.
Iitshintshi zoluhlu lwe-S6700 (S6700s) zizitshintshi zebhokisi ye-10G elandelayo. I-S6700 inokusebenza njengokutshintsha ukufikelela kwiziko ledatha ye-Intanethi (IDC) okanye iswitshi engundoqo kuthungelwano lwekhampasi. I-S6700 inentsebenzo ekhokelayo kwimizi-mveliso kwaye ibonelela ukuya kuthi ga kwi-24 okanye kwi-48 ye-line-speed 10GE port. Ingasetyenziselwa kwiziko ledatha ukubonelela nge-10 Gbit / s ukufikelela kwiiseva okanye ukusebenza njengotshintsho oluphambili kwinethiwekhi yekhampasi ukubonelela ngokudityaniswa kwe-10 Gbit / s. Ukongeza, i-S6700 ibonelela ngeenkonzo ezahlukeneyo, imigaqo-nkqubo ebanzi yezokhuseleko, kunye neempawu ezahlukeneyo zeQoS ukunceda abathengi ukuba bakhe amaziko edatha ahlaziyekayo, alawulwayo, athembekileyo nokhuseleko. I-S6700 ifumaneka kwiimodeli ezimbini: S6700-48-EI kunye S6700-24-EI.
I-CloudEngine S6730-H Series 10 GE Switches ihambisa i-10 GE downlink kunye ne-100 GE uplink yokunxibelelana kweekhampasi zeshishini, abathwali, amaziko emfundo aphakamileyo, kunye noorhulumente, ukudibanisa inethiwekhi yeNdawo yokuFikelela kweNethiwekhi engenazingcingo (i-WLAN) yokuFikelela kuLawulo (AC), ukuxhasa ukuya kuthi ga Amanqaku okufikelela kwi-1024 WLAN (APs).
I-Quidway S5300 series switch gigabit switch (apha ekubhekiswa kuyo njenge-S5300s) sisitshintshi esitsha se-Ethernet gigabit esiphuhliswe nguHuawei ukuhlangabezana neemfuno zokufikelela kwi-bandwidth ephezulu kunye ne-Ethernet yokunikezelwa kweenkonzo ezininzi, ukubonelela ngemisebenzi enamandla ye-Ethernet kubathwali kunye nabathengi beshishini. Ngokusekwe kwisoftware yokusebenza okuphezulu kwesoftware kunye nesoftware yeHuawei Versatile Routing Platform (VRP), i-S5300 inezinto ezinkulu kunye ne-gigabit ujongano oluphezulu, ibonelela nge-10G uplinks, ukuhlangabezana neemfuno zabathengi ze-1G kunye ne-10G izixhobo ze-uplink zoxinaniso oluphezulu. I-S5300 inokuhlangabezana neemfuno zeemeko ezininzi ezinje ngokudibana kwenkonzo kumnatha wekhampasi nakwiintranet, ukufikelela kwi-IDC ngereyithi ye-1000 Mbit / s, kunye nokufikelela kwiikhompyuter kwinqanaba le-1000 Mbit / s kwii-intranet. I-S5300 sisixhobo esimilise okwetyala esine-chassis ye-1 U ephezulu. Uchungechunge lwe-S5300 luhlelwe kwi-SI (standard) kunye ne-EI (ephuculweyo). I-S5300 yenguqulo ye-SI ixhasa imisebenzi emi-2 yoLwakhiwo kunye nemisebenzi esisiseko yoLuhlu lwe-3, kwaye i-S5300 yenguqulo ye-EI ixhasa iiprothokholi zendlela enzima kunye neempawu zenkonzo etyebileyo. Iimodeli ze-S5300 zibandakanya i-S5324TP-SI, S5328C-SI, S5328C-EI, S5328C-EI-24S, S5348TP-SI, S5352C-SI, S5352C-EI, S5324TP- PWR-SI, S5328C-PWR -PWR-EI, S5348TP-PWR-SI, S5352C-PWR-SI, kunye ne-S5352C-PWR-EI.
S3700 Series Enterprise itshintshela
Ukutshintshela ngokukhawuleza kwe-Ethernet ngaphezulu kobhedu ojijekileyo, uthotho lweHuawei's S3700 ludibanisa ukuthembeka okungqinekayo kunye nokuhamba ngendlela eyomeleleyo, ukhuseleko, kunye neempawu zolawulo kwiswitshi ehambelana namandla.
Ukuthunyelwa kwe-VLAN eguqukayo, amandla e-PoE, imisebenzi ebanzi yokuhamba, kunye nokukwazi ukufudukela kwinethiwekhi ye-IPv6 ukunceda abathengi beshishini ukuba bakhe iinethiwekhi ezizayo ze-IT.
Khetha iimodeli eziqhelekileyo (i-SI) ze-L2 kunye notshintsho olusisiseko lwe-L3; Ukuphuculwa (i-EI) iimodeli zixhasa iinkqubo ezininzi ze-IP kunye neenkqubo ezintsonkothileyo zendlela (i-OSPF, IS-IS, BGP).
Isisombululo se5G Fronthaul Passive WDM
Isisombululo se5G Fronthaul Semi-Active WDM
Isixeko saseFoshan siye kwimeko yeWDM
1.1. Yakha inkqubo entsha ye-40-wave DWDM ngenqanaba elinye le-10Gbps
1.2. Inkxaso yoku-1 + 1 yendlela ezimbini zokukhusela ngokuzenzekelayo
I-HUANET iye kumnyhadala we-NETCOM
Ukusukela nge-25 ka-Agasti ukuya kwi-27, i-2017, i-NETCOM 2017 ibibanjelwe e-Expo Centre Norte, eSao Paulo, eBrazil. I-HUANET idibanise iiseti ezimbini zezisombululo zenkqubo kunye neemveliso ezivela kwi-FTTH kunye ne-WDM, ebonakalise ngokupheleleyo amandla e-HUANET kwimarike yaseBrazil.
I-HUANET ibizimase uMboniso we-CommunicAsia
Ukusukela nge-23 ukuya kwi-25 ka-Meyi ka-2017, i-CommunicAsia 2017 ibibanjelwe eMarina Bay Sands Singapore I-HUANET idibanise iiseti ezimbini zezisombululo kunye neemveliso ezivela kwi-FTTH kunye ne-WDM, ebonakalise ngokupheleleyo amandla e-HUANET kwimakethi ese Mpuma mpuma Asia.
I-HUANET ibizimase uMboniso we-Convergence India
Ukusuka nge-8 ka-Februwari ukuya kwi-10, 2017, iConvergence India 2017 ibibanjelwe ePragati Maidan, eNew Delhi, e-India. I-HUANET idibanise iiseti ezimbini zezisombululo zenkqubo kunye neemveliso ezivela kwi-FTTH kunye ne-WDM, ebonakalise ngokupheleleyo amandla e-HUANET kwimarike ye-Middle East.
IHuawei Qsfp +, Umthumeli weXfp, Ukudluliselwa kweModyuli yangaphandle, I-Sfp C ++, Imodyuli yeFiber Optical, Ixabiso leHuawei Olt,